Fampiharana tena manokana 3 ho an'ny S Pen an'ny Galaxy Note 10+ | Androidsis
Fampiharana 3 izay majika madio ho an'ny S Pen an'ny Galaxy Note 10+
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, Samsung
Hanolotra anao izahay anio Fampiharana tena manokana 3 ho an'ny S Pen amin'ny Galaxy Note 10+ ary araraoty amin'izay ny traikefa nomen'ny pensilihazo izay tafiditra tsara ao anatin'ny habaka anatiny an'ity telefaona Samsung lehibe ity.
Tena misy fampiharana 3 azo ampiasaina ny S Pen ary mamela antsika hamantatra tsara kokoa ary fampiononana lehibe kokoa raha ny amin'ny fanaovana asa isan'andro amin'ny fitaovana ilaina sasany ho an'ny maro. Andao ataontsika izany ary aseho aminao ireo fampiharana telo tena manokana ireo.
1 Microsoft Math Solver
2 Touch Calculator
3 Hetezo ny sary apetaka
Una fampiharana Microsoft mahafinaritra ary efa nanana izany maimaim-poana tanteraka izahay nandritra ny roa volana. Miaraka amin'ny S Pen isika dia ho afaka "Ataovy" sary ireo fandidiana ireo mba hahafahan'ny Microsoft Math Solver sakano ny soratra ary atolory anay haingana ny valiny.
Rehefa manomboka ny fampiharana dia tsy maintsy mifidy eo amin'ny kiheba ambony «Sorito» ary afaka manomboka manao sary na manoratra amin'ny S Pen antsika isika amin'ny alàlan'ny fametrahana mazava tsara omeny antsika. Ny marina dia ny majika an'ity fampiharana ity dia mahatalanjona afaka mahavita karazana olana arithmetika rehetra toy ny isa marobe, ny complexe, ny radicals, ny fractions, ny derivatives, ny integral ary maro hafa.
Raha te-hanapoaka ny S Pen ianao, aza mangataka andro amin'ny fametrahana ity fampiharana antsoina hoe Microsoft Math Solver ity ary manana izany maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ianao.
Ary raha toa ka afaka manodina ny vola sy fiasa sarotra indrindra ny fampiharana teo aloha, amin'ny Calculator Touch, ary efa niresaka momba ny volana lasa izay isika, mamela antsika manana calculatera iray manontolo, fa izany dia ahafahantsika mampitombo be ny vokatra.
Alohan'ny fanaovana kajy isika hampiasa sy hanao sary miaraka amin'ny S Pen antsika tena mifantina ny isa ary mandrafitra ny fanampiana, fanalana na fampitomboana, toy ny asa maro hafa.
Ny fahefana rehetra an'ny S Pen ho ampiasao amin'ny fomba hafa mihitsy ny calculer izay ananantsika matetika amin'ny findaintsika. Ny S Pen dia manampy isa ho an'ity fampiharana izay anananao maimaimpoana amin'ny Play Store ity.
Calculator Touch - miaraka amin'ny fanekena ny sora-tanana
Hetezo ny sary apetaka
Ary na dia miatrika fampiharana freemium miaraka amina dokambarotra marobe aza isika, ny marina dia afaka manome traikefa hafa antsika amin'ny S Pen. Io dia mamela antsika ara-dalàna maka sary ary manaova sary miaraka amin'ny S Pen maka tahaka ny silhouette iray an'ny olona na ny pikantsary izay nataonay tamin'ny Galaxy Note 10+ anay.
Raha ny marina, raha azontsika atao ny manambatra azy amin'ny fitaovana pikantsary izay ananantsika ao amin'ny Note 10, ity fampiharana ity dia afaka manolotra antsika fiasa bebe kokoa. Ny tsara indrindra dia izy, manana vera manelatselatra izay manitatra ny faritra anaovantsika sary amin'ny S Pen mba hahalavorary araka izay azo atao ny lalana.
Manana izany maimaim-poana isika, na dia manafika antsika amin'ny dokambarotra aza. Hafa fomba iray hanana traikefa hafa amin'ny Galaxy Note 10. Aza adino ireo fiasa manokana anananao ireo camin'ny S Pen anao amin'ny Galaxy Note 10+ ary naoty hafa.
Hetezo Paste Photo seamless
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana 3 izay majika madio ho an'ny S Pen an'ny Galaxy Note 10+
Android 10 dia ho tonga aloha kokoa noho ny nandrasana tamin'ny Samsung Galaxy A60 sy M40
Ny famaritana LG W20 dia voatanisa ao amin'ny tahiry Google Play Console